Xeerarka gudbinta qoraalka – Kaasho Maanka
Xeerarka gudbinta qoraalka
Waa inaad adigu leedahay xuquuqda mulkiyadda(Copyright) ee qormada.
Lama ogola qormooyinka ay ku jiraan erayada cayda mutuxan ama xadgudub shakhsiyeed.
Lama ogola sawirrada qaawan balse haddii ay lagama maarmaan u yihiin sharraxaadda qormo cilmiya waad adeegsan kartaa.
Luqadda qormooyinka lagu soo gudbinayo waa ta Soomaaliga.
Kaasho Maanka waxa uu fasax u haystaa inuu ku fidiyo qoraalkaaga baraha bulshada.
Ma jiro wax dhaqaale ah oo Kaasho Maanka ku bixiyo soo gudbinta qormooyinka.
Noocyada Qormooyinka la ogol yahay
Qaybaha qoraallada aan mudnaanta siinno waqtigan waa; Sayniska, Diimaha, Taariikhda, Arrimaha Bulshada, Sheekooyin faneedda, fanka (Art) iyo gorfaynta buugaagta balse qormo walba oo aan jebinayn xeerarkayaga waan daabici doonnaa.
Qaab dhismeedka qormada
Haddii ay qormadaadu dheer tahay fadlan u samee Horudhac, qaybi oo qayb walbana cinwaan hoosaad raaci, kadibna gunaanad samee.
Fadlan hubi khaladaadka higaadda ah inta aadan soo gudbin.
Fadlan raaci tixraacyo qormadaada.
Fadlan raaci sawiro tayo sare leh, waxaan ku talinaynaa sawirka sare ee qormadu inuusan ka yarayn 900*400px, (Khasab maaha inaad sawir raaciso, tifatirayaasha ayaa hawshaa qaban kara).
Qormadaadu waa inaysan ka yarayn 350 erey.
Qaabkee ayaan u gudbin karaa qormadayda?
Qormadaada waxa aad noogu soo gudbin kartaa mid kamida qaababkan hoose
Email-kan kaashomaanka@gmail.com ku soo dir qormadaada oo dhamaystiran.
Adiga oo aan ka bixin boggan ayaad riixi kartaa halkan, kadibna is diiwaan geli oo buuxi godadka foomka diyaarsan ee kuu soo bixi doona, ugu danbayntana riix botoonka hoose ee ay ku qoran tahay “Submit for Review“.
Haddii ay jirto mareeg kale oo aad hore ugu daabacday qormadaada, waxaad Email-ka sare ku soo diri kartaa URL (Linkiga) qormada oo kaliya.
Haddii ay bahda Kaasho Maanka kuu soo direen Username iyo Password, waxaad riixdaa halkan kadibna gal adiga oo adeegsanaya Username-ka iyo Password-ka lagu siiyay.
Waxaad dhammaadka qormadaada u horraysa raacinaysaa magaca aad rabtid inuu ka muuqdo bogga iyo sidoo kale faah-faahin kooban oo adiga kugu saabsan (Bio), sawirkaaga muhiim maaha laakiin waad raacin kartaa haddii aad rabtid inuu ka muuqdo bogga.
Maxaa dhacaya kadib gudbinta qormada?
Ugu badnaan todobaad gudihii waxa qormadaada eegi doona mid kamida tifatirayaasha bogga oo samayn kara bedelaadaha u muuqda sida bedelidda cinwaanka qormada, bedelidda dhismaha qaar kamida jumladaha (Macnaha waxba u dhimayn) isaga oo ogaysiinaya ama aan ogaysiinayn qoraaga hadba inta bedelaaddu le’eg tahay.
waxa suura gal ah in la diido qoraalkaaga haddii uu ka baxsan mawduucyada aan aqblano, ama uu ka yar yahay xadka ugu yar ee la ogol yahay, sidoo kale waxa laga yaabaa in sababo kale loo diido qormadaada.
Qormada lagu daabaco mareegtan lama tir-tiri doono marnaba haddii ayna jirin sabab khasbaysa in laga saaro.